Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukuhamba okukhuselekileyo kwe-COVID kulindeleke ukuba kuqhubele phambili amafutha kuhambo lwemoto
Imfuno yeholide ngemoto - nokuba iphesheya okanye e-UK - ikhawulezile ngokukhawuleza ngenxa yeenkxalabo ze-Covid kunye nokubaluleka kokugcina umgama phakathi kwentlalontle.
Ukuqhubeka kwemfuno yohambo olukhuselekileyo lwe-Covid kulindeleke ukuba kuphembelele i-boom kubantu abahamba ngeeholide ukuba bahambe ngemoto yabo ngo-2022, ukuze bakwazi ukude ekuhlaleni kwaye bahlale benxibelelana nabanye ubuncinci, ityhila uphando olukhutshwe e-WTM London namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) .
Xa ubuzwa: Ngaba lo bhubhani ukwenze ukuba uthathe indawo yokuya emotweni (iholide e-UK okanye phesheya kolwandle apho uhamba ngemoto ukuze unciphise intsebenziswano yakho nabanye abantu)? I-50% yabaphenduli abathatha inxaxheba kwiNgxelo yoShishino yase-WTM yaseLondon bathi 'ewe'.
Uphando lwabathengi be-1,000 base-UK lubonisa abantu abaninzi eWales kunye ne-West Midlands banokuthi bakhethe i-car-cation, kunye ne-66% yabaphenduli eWales kunye ne-61% e-West Midlands, ephendula ewe.
Izizukulwana eziselula zityekele kakhulu ekubetheni indlela kwi-car-cation, ngokophando, kunye ne-62% ye-18-21s, i-58% ye-22-24s, i-63% ye-25-34s kunye ne-59% ye-35-44s ithi Ubhubhani we-Covid ubenze ukuba bangakwazi ukuya eholideyini ngemoto kwaye banciphise intsebenziswano yabo nabanye. Kuphela yi-39% yabangaphezu kwama-55s abathi banokuthi bacinge nge-car-cation.
I-WTM London ithatha indawo kwiintsuku ezintathu ezizayo (ngoMvulo 1 - ngoLwesithathu 3 Novemba) e-ExCeL - London.
UMlawuli weMboniso we-WTM eLondon uSimon Press uthe: “Imfuno yeholide ngemoto - nokuba iphesheya okanye e-UK - ikhawulezile ngokukhawuleza ngenxa yeenkxalabo ze-Covid kunye nokubaluleka kokugcina umgama phakathi koluntu.
"Silindele ukuba le mfuno iqale iqale indlela entsha yokuhamba, kunye nabaqhubi kunye neendawo eziya kuzo ziphinde zibonelele ngeenketho ezintsha zabakhweli beemoto abafuna ukuhamba emva kwevili ngo-2022."